Iindaba -Ulukhetha njani olona hlobo lucimi-mlilo
Isicimi-mlilo sokuqala sasinelungelo elilodwa lomenzi wechiza ngekhemistri u-Ambrose Godfrey ngo-1723. Ukusukela ngoko, iintlobo ezininzi zezicimi-mlilo ziye zaqanjwa, zatshintshwa zaza zaphuhliswa.
Kodwa inye into ehlala ifana nokuba yeyiphi ixesha-izinto ezine kufuneka zibekhona umlilo ukuze ubekhona. Ezi zinto zibandakanya ioksijini, ubushushu, ipetroli kunye nokusabela kweekhemikhali. Xa ususa enye yezinto ezine kwi "unxantathu womlilo, ”Umlilo ungacinywa.
Nangona kunjalo, ukuze ucime umlilo ngempumelelo, kufuneka usebenzise ifayile ye- isicima-mlilo esifanelekileyo.
Ukuze ucime umlilo ngempumelelo, kufuneka usebenzise isicima-mlilo esichanekileyo. (Ifoto / uGreg Friese)
Kutheni izixhobo zomlilo, ii-ambulensi zifuna izicimi-mlilo eziphathwayo
Izifundo ekusebenziseni isicima mlilo
Ungazithenga njani izicimi-mlilo
Ezona ndidi zixhaphakileyo zokucima umlilo ezisetyenziswa kwiindidi ezahlukeneyo zomlilo:
Isicimi-mlilo samanzi: Izicimi-mlilo zamanzi zicima imililo ngokususa ubushushu kunxantathu womlilo. Zisetyenziselwa imililo yodidi A kuphela.
Isicimi-mlilo somlilo esomileyo: Izitshizi zokucima iikhemikhali ezomileyo zicima umlilo ngokuphazamisa ukusabela kweekhemikhali kunxantathu womlilo. Zisebenza ngokukuko kwimililo yeCandelo A, B kunye no-C.
Isitshizi sokucima umlilo se CO2: Izicima-mlilo zecarbon dioxide zithatha ioksijini yomxantathu womlilo. Basusa ubushushu ngokukhupha okubandayo. Zingasetyenziswa kumlilo weCandelo B no-C.
Kwaye ngenxa yokuba yonke imililo iphenjelelwa ngendlela eyahlukileyo, zininzi izicimi-mlilo ezisekelwe kuhlobo lomlilo. Ezinye izicima-mlilo zinokusetyenziswa ngaphezulu kodidi olunye lomlilo, ngelixa ezinye zilumkisa ngokusetyenziswa kwezitshizi zokucima ezenziwa kwiklasi ethile.
Nalu uqhekeko lwezitshizi zokucima umlilo ezihlelwe ngohlobo:
Izitshizi zokucima umlilo zodidi: Izinto ezisetyenziselwa izicimi-mlilo:
Iklasi A Isicimi-mlilo Ezi zicimi-mlilo zisetyenziselwa imililo ebandakanya izinto eziqhelekileyo ezinokutsha, ezinjengomthi, iphepha, ilaphu, inkunkuma kunye neeplastikhi.
Iklasi B yokucima umlilo Ezi zicimi-mlilo zisetyenziselwa imililo ebandakanya izinto ezingamanzi ezinokutsha, ezifana negrisi, ipetroli kunye neoyile.
Iklasi C isicimi-mlilo Ezi zicimi-mlilo zisetyenziselwa imililo ebandakanya izixhobo zombane, ezinje ngeemoto, iitshintshi nezixhobo zombane.
Iklasi D isicima-mlilo Ezi zicimi-mlilo zisetyenziselwa imililo ebandakanya isinyithi esinokutsha, njenge potassium, isodiyam, ialuminiyam nemagniziyam.
Iklasi K yokucima umlilo Ezi zicimi-mlilo zisetyenziselwa imililo ebandakanya iioyile zokupheka kunye negrisi, ezinje ngamafutha ezilwanyana kunye nemifuno.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba umlilo ngamnye ufuna isicima mlilo esahlukileyo ngokweemeko.
Kwaye ukuba uza kusebenzisa isicima-mlilo, khumbula nje i-PASS: tsala ipini, jolisa umlomo okanye umbhobho emazantsi omlilo, cudisa inqanaba lokusebenza ukuze ukhuphe isixhobo sokucima kwaye utshayele umlomo okanye ithumbu ngapha nangapha ude ucime umlilo.